CleanMyMac X dia mifanaraka amin'ny Mac M1 | Avy amin'ny mac aho
Aorian'ny fahatongavan'ilay Mac vaovao miaraka amin'ny processeur Apple Silicon dia fotoana tokony hanavaozana ireo rindranasa hanararaotra feno ny endrik'izy ireo, ary CleanMyMac X izao dia manatevin-daharana ny lisitry ny rindranasa tohanan'ny zanatany, miampy famolavolana vaovao.
Raha iray amin'ireo manana vintana manana Mac vaovao miaraka amina processeur M1 ianao, ankoatra ny fankafizanao ireo fiasa tena tsara ananan'ireto solosaina ireto dia azonao atao izao ny manararaotra ny atin'ny CleanMyMac X anao, iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hitazonana ny Mac tsy mila manasarotra ny fiainanao. Ho fanampin'izany, ny endriny dia haverina hamboarina hifanaraka amin'ny hatsaran'ny macOS Big Sur, miaraka amin'ny loko vaovao, interface tsotra kokoa ary manafoana ny antsipiriany fanampiny izay tsy nitondra na inona na inona ho an'ny fampiharana. Ny menio sisiny dia mamela ny fivezivezena intuitive kokoa, ary ny sarimiaina 3D dia manome azy endrika maoderina izay ankasitrahana hatrany amin'ny Mac vaovao anao.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny CleanMyMac X dia ny fahafaha manafoaka toerana amin'ny kapila mafy ataonao tahaka ny fampiasa sasany hafa. Zava-dehibe ny fanesorana ny fako, fa tsy ny fanesorana izay zava-dehibe mety hiteraka tsy fetezan'ny rafitra na ny fampiharana hafa. Amin'ny CleanMyMac X dia tsy hanana an'ity olana ity ianao, ary ankehitriny dia miasa tsara kokoa miaraka amin'ny fahaizana manala Universal Binaries, ireo rakitra mamela ny fampiharana hihazakazaka amin'ny Mac miaraka amina processeur Intel sy M1. Amin'ity fampiharana ity dia hofoananao ireo izay tsy mila ny solosainao, manafaka toerana iray manan-danja amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny.
CleanMyMac X koa dia manana asa fiarovana ho an'ny rafitrao, hametrahana fiarovana fanampiny ho an'izay efa natolotr'i Apple ho default amin'ny rafitrao. Ohatra ho azonao atao ny manala ny malware Silver Sparrow, izay nahatratra Mac an'arivony erak'izao tontolo izao avy amin'ny rindrambaiko vaky na fanavaozana sandoka avy amin'ny rindranasa hafa toa ny Flash. Na ny kinova CleanMyMac X na maimaim-poana sy maimaim-poana dia ahafahanao mamakafaka ny solosainanao, mamantatra malware ary manafoana azy raha misy izany. Raha mila fahazoan-dàlana mamela anao hampiasa an'ity rindranasa mahafinaritra ity tsy misy fetrany ianao dia manana famandrihana € 29,95 isan-taona na € 89,95 amin'ny fividianana indray mandeha. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » CleanMyMac X dia mifanaraka amin'ny Mac M1 vaovao izao